Global Voices teny Malagasy » Maraoka: Tandindonin-doza ve ny Kristiana? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Avrily 2010 5:40 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika avylavitra
Sokajy: Maraoka, Fahalalahàna miteny, Fivavahana, Politika
Tany amin'ny fiandohan'ny Martsa, nahamarika ireo mpanara-baovao fa manodidina ny 20 eo ireo mpiasa tranainy tao amina fitaizana zaza kamboty iray no noroahana  handao ny firenena izay noraisin'izy ireo ho tanindrazany. Ilay tranga, ary maro hafa no nanaraka azy ity, dia nametraka ho eny aloha indray ny adihevitra momba ny toeran'ny finoana Kristiana ao anatin'ny Fanjakana.
Ny tondrozotra ofisialy Maraokana dia milaza fa eo amin'ny 98.7 – 99 isan-jato amin'ny mponina dia Silamo, (ny ambiny dia miparitaka ho 1% Kristiana ary 0.2% Jiosy), tafiditra anatin'io antontan'isa io ireo vahiny Eraopeana monina any Maraoka. Voarara ny firehetana (hafanam-po) tafahoatra, sy ny fivadihana amin'ny finoana Silamo. Na izany aza, afaka manaraka malalaka ny finoany ireo vahiny kristiana, sady betsaka ireo trano fiangonana, maro no nolovaina tamin'ny vanim-potoana fanjanahantany Frantsay. Antsefantsefany eny, ireo Jiosy teratany vitsy an'isa, dia avela malalaka koa hivelona ny finoan-dry zareo.
Na eo aza ny fiantohana ny fahalalahana, toa tsinjo ihany fa nandray fepetra somary henjankenjana ny governemanta momba ny hafanam-po tafahoatra, na mibaribary izany na zara fa hita. The Moroccan Dispatches [Ny vaovao tselatra Maraokana] dia nizara tranga iray niseho tsy ela akory  nahitàna pretra Katolika iray, teratany Ejiptiana, noroahana handao ny firenena:
An-taona maro no niasa tao Maraoka ireo Evanjelista, tanjom-pisian'izy ireo voalohany tamin'izany ny hisintona ny Silamo. Ela niasàna ny Katolika, saingy kosa tsy niditra tamin'ny fnaovana amboletra (ankafanam-po). Noho izany dia nahazendana loatra ny hoe pretra Katolika no notànana ary avy eo noroahana tamin'ny faran'iny herinandro lasa iny.
Mizara hafatra iray voarainy avy amina pretra Katolika iray miasa ao Maraoka ilay mpitoraka blaogy:
Ny Alahady 7 Martsa, dimy minitra alohan'ny hanombohan'ny fotoam-pivavahana; niditra ny toerana misy anay frera ny mpitandro filaminana ao amin'ny tanànan'i Larache ary nisambotra ny iray tamin'ireo rahalahinay, Rami Zaki, frera tanora Ejiptiana iray mbola eo amin'ny dingana voalohany amin'ny fiofanana ary vao herintaona monja niarahana taminay. Nilazàna izy hanaraka ireo mpitandro filaminana, tsy afaka nitondra na inona na inona, ary tsy nilazàna akory izay anton'ny fisamborana azy…
…Rehefa nampidirina tany anaty fiaramanidina i Rami, nalaina tany aminy ny fahazoan-dàlany (passport) ary nomena ny mpanamory izay hanome izany miaraka amin'i Rami ho eo an-tànan'ny mpitandro filaminana ao Cairo. Mbola notazonin'ny mpitandro filaminana tao Cairo nandritry ny ora fito izy mba hanaovana fanadihadiana hafa indray talohan'ny nanomezana azy alàlana hiantso an-tariby ny frera mpiray fikambanana aminy. Nanomboka ny Alahady, ny maraina nanaraka ny nisamborana azy, hatramin'ny Talata tolakandro, rehefa navotsotra izy – izay rehefa mitambatra dia 50 ora – tsy nahazo ny fanajàna ny zo maha-olona azy avy amin'ireo mpitandro filaminana tao Maraoka sy Ejipta i Rami na dia kely aza.
Anaty hafatra iray hafa , no anehoan'ny mpitoraka blaogy fa nanaraka ilay fandroahana ny olon-drehetra, amin'ny fitantaràna tranga niseho tsy ela akory izay, ahitàna tanambokovoko nesorina tamin'ny toerana nisy azy an-taona maro:
Toerana niantonan'ny tanambokovoko iray tao Meknés
Ity no toerana niantonan'ny tanambokovoko tao amin'ny medina any Meknes. Ireo Katolika tao izay nampianatra asa sy tenim-pirenena ny Maraokana dia tsy niditra velively tamin'ny resaka hafanam-po tafahoatra nefa dia tratry ny fankahalàna Kristiana taorian'ireny fandroahana Kristiana tato ho ato ireny. Tamin'ny herinandro lasa, nendahana ilay tanambokovoko ary nopotipotehana. Ny lafiny tsara, ireo Maraokana nahita tombontsoa tamin'ny tolotra nataon'izy ireny dia nirotsaka an-tsitrapo namerina nanamboatra ilay tanambokovoko.
Tanaty hafatra vao haingana kely mihitsy , io mpitoraka blaogy io ihany no nitondra fanampim-baovao tan-dahatsoratry ny TelQuel momba ny zava-miseho, ka hoy indrindra izy momba izay:
Tao anatin'ny lahatsoratra fototra, mivoitra fa ny ankabeazan'ireo Maraokana nivadika ho Kristiana dia vokatry ny nataon'ny media Arabo fa tsy noho ny nataon'ireo misionera vahiny akory. Ity dia nifandrify indrindra tamin'ny zavatra niainako: maro amin'ireo Maraokana fantatro no efa nifampiresaka ela tamin'ireo misionera Kristiana momba ny resa-pinoana nefa na iray aza tsy nisy nivadika. Ny sasany niaro ny finoana Silamo eo am-pifohana ‘hashish’ mba ho fandranitana fotsiny ihany ireo Kristiana, izany dia mba hahazoanao an-tsaina hoe ahoana ny fifikiran'ireo Maraokana maro amin'ny maha-Silamo azy . Io fandinihana momba ny misionera vahiny io, mazava loatra, no mahatonga ireo fandroahana vahiny maro tato ho ato ho tsy dia manaraka lalantsaina sy tsy mitombona.
Fehiny, ilay mpitoraka blaogy dia nanamarika ny tsindry nahazo ny media tato ho ato  ary miampanga:
Tato ho ato dia nakatona ireo media be fanakianana ny governemanta. Ary mety ho tratra koa i Tel Quel. Nefa raha mbola mijoro foana ihany ry zareo, dia mba hisy hàbaka (toerana), na dia kely monja aza ho an'ny fifanakalozan-kevitra sy ny fisainana fanakianana momba ny zava-mitranga amin'izao fotoana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/04/08/5614/
 dia nizara tranga iray niseho tsy ela akory: http://moroccandispatches.blogspot.com/2010/03/catholics-also-targeted-in-crackdown.html
 hafatra iray hafa: http://moroccandispatches.blogspot.com/2010/03/scenes-from-morocco-destroyed-cross.html
 hafatra vao haingana kely mihitsy: http://moroccandispatches.blogspot.com/2010/04/more-religious-persecution-coverage.html
 ny tsindry nahazo ny media tato ho ato: http://www.talkmorocco.net/forums/dec-2009-knocking-on-the-palace-door/